कम्प्यूटर बाह्य को क्षेत्र मा एक समयमा उपकरणहरू विभिन्न देखा पर्नुभयो र एडअन व्यक्तिगत कम्प्युटर कार्यक्षमता विस्तार गर्ने। काम केही मरेका अन्तमा थियो, र केही कार्यालय उपकरण को निर्माता को एक नम्बर को लागि भनेर उत्पादन को मुख्य कार्यान्वयन थिए, यस्तो विशाल विकास गरेका छन्। को एक रोचक विकास इनपुट उपकरणहरू जानकारी एक ग्राफिक्स ट्याब्लेट भएको छ। उहाँले थप प्राकृतिक र मानव साधन लागि छाँटकाँट बन्ने, कार्यात्मक जोइस्टिक र माउस संयोजन गर्न, तर पनि एकदम प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार सक्षम मात्र थियो।
को विकास को इतिहास रेखाचित्र लागि पाटी अन्तिम शताब्दीको 60s मा सुरु भयो। एक ग्राफिक ट्याब्लेट देखा पर्नुभयो र चूहों को पहिलो व्यावसायिक नमूनाहरू संग समानान्तर मा पर्याप्त विकास गरे। कम्प्युटर, बारी मा, ईन्जिनियरहरु सञ्चालन गर्न डिजाइन गरिएको छ व्यक्तिगत, पाटी को श्रेणीका एक लामो बाटो अझै थियो।
यी उपकरणहरू को विकास मा एक शक्तिशाली धक्का डिजाइन पेशेवरों Wacom दिनुहोस्। भारी कम्प्युटर बिस्तारै व्यक्तिगत उपकरणहरूमा अत्यधिक विशेष कम्प्युटर बाट कायापलट थिए। एक साथ यो प्रक्रिया एक ग्राफिक्स ट्याब्लेट रचनात्मक मुक्त रेखाचित्र को कार्यहरू को एक विस्तृत श्रृंखला समाधान गर्न सक्ने एक उपकरण नजिक हुँदैछ।
ट्याब्लेट को सुधार मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कलम ट्रान्समिटर कुनै पनि शक्ति स्रोत मुक्त छ। Wacom देखि लेखनी मात्र चित्रकला लागि भएको छ सुविधाजनक, तर पनि माउस कार्यक्षमता को पूर्ण सेट खुलिरहेको। यो संग, सबै Windows सुविधाहरू काम गर्न मौका रह्यो। क्लिकहरू, सन्दर्भ मेनु दायाँ माउस बटन, सजिलै एक ग्राफिक्स ट्याब्लेट प्रयोग गर्न सक्छन् विन्डो तान्न सक्ने क्षमता छ।
इनपुट उपकरणहरू दुवै प्रकारका ग्राफिक जानकारी र आफ्नो उत्पादन को वर्तमान विविधता भएको hapless प्रयोगकर्ता चित्रकला लागि ग्राफिक्स ट्याब्लेट किन्न निर्णय गर्ने चकित हुन सक्छ। उपकरणहरू धेरै प्रकार को आज दायरा बजार मा सबै भंग बुझ्न यो प्रशस्त प्रयास गर्नुहोस्।
पहिलो प्रकार एक मनपरी ग्राफिकल जानकारी प्रविष्ट गर्न मोडेल जोडती। अक्सर आधारभूत कार्यहरु र गुण को एक सेट उपयोग, A6 काम सबैभन्दा सरल स्वरूप। तिनीहरूलाई पूर्ण कलम, कहिले काँही एक विशेष माउस छ। उन्नयन वृद्धि स्पेक्ट्रल गुणस्तर, अतिरिक्त गुण को परिचय सँगसँगै छ। मोडेलहरू त्यहाँ थप कुञ्जीहरू छन्, सफ्टवेयर विकास, सामान को सेट विस्तार। को काम सतह को प्रारूप A4 मानक पुग्छ।
दोस्रो प्रकार डिजाइन प्लेट-प्रकार (: मिनी-ट्याब्लेट उदाहरणका लागि) छन्। तर एक पहिचान हस्ताक्षर छोड्न सक्नुहुन्न पूर्णतया तिनीहरूलाई आकर्षित एकदम वास्तविक हो। यो संभावना छ कार्यालय उपकरण फैशन, तर सानो कार्यात्मक। समान प्रकारको "डिजिटल नोटप्याड" मात्र हस्तलेखन दस A4 पृष्ठ लाग्न सक्छ कि छैन, तर पनि सादा पाठ, सामान्य विन्डोज-मैत्री सम्पादकहरूले यो रूपान्तरण समावेश गर्नुहोस्।
संयोजन परिणामस्वरूप संयुक्त उपकरणहरू को तेस्रो प्रकारको ट्याब्लेट सुविधाहरू र मनिटर इन्टरफेस। तिनीहरूले पनि अन्तरक्रियात्मक कलम प्रदर्शन प्रकार रूपमा उल्लेख छन्। यी उपकरणहरू यसको समयमा कारण ध्यान प्राप्त भएको छैन जो लेखनी, को विचार को एक विस्तार भएका छन्।
तपाईं एक ग्राफिक्स ट्याब्लेट चयन गर्न कसरी त्यसपछि एक प्रश्न, सबै को पहिलो गर्नुअघि तपाईं भने, यो कार्यहरू यसलाई सामना गर्न के विचार लायक छ। यो केवल एक उपकरण हो कि भूल छैन। यसको कार्यक्षमता बढी उन्नत सफ्टवेयर प्रयोग सम्भव छ विस्तार।
कम्प्युटर को आधुनिकीकरण
म एक ताप केबल "देवी" किन चाहिन्छ?
हाम्रो फोबिया मकवानहरूको डर हो
सामान दायरा। यो के हो?
Abramova Svetlana: जीवनी अग्रणी
ग्रीक पौराणिक कथाहरु मा Titans हुन्